Culimada culus ee Dembiga, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Weligaa miyaad la yaabtay sida Ciise u dhihi karo inuu harqoodkiisu yahay mid dabacsan oo culeyskiisuna uu fudud yahay iyadoo la tixgelinayo wuxuu u adkaystay inuu yahay wiilkii Ilaah ee ku dhashay hilibkii intii uu noolaa.
Wuxuu dhashay Masiixa la sii sheegay, Herodos wuxuu doonayay inuu dilo markuu dhallaanka ahaa. Oo wuxuu ku amray in carruurta reer Beytlaxam ah oo labadoodu yaraayeen ama labadoodiiba in la dilo. Markii uu yaraa, Ciise, sida da 'kasta oo kale oo dhallinyar ah, wuxuu ku dhacay fidno dhan. Markuu Ciise macbudka ku dhawaaqay inuu isagu subkan yahay, dadka sunagogga jooga ayaa magaalada ka eryay waxayna isku dayeen inay hoos u riixaan jaranjarada. Wuxuu yidhi ma haysto meel uu madaxiisa sariirta ku seexdo. Oo aad buu u ooyay wejigiisa Yeruusaalem la jecel yahay rumaysad darradiisa aawadeed oo had iyo goorba waa lagu xumeeyey, waana lagu shakiyey oo lagu majaajilooday hoggaamiyeyaashii caqiidada xilligiisa. Waxaa lagu tilmaamay inuu yahay cunug sharci darro ah, khamri sakhraan ah, dambiile ah iyo xitaa nebi been ah oo jinniyo qaba. Wuxuu ku noolaa cimrigiisii ​​oo dhan isagoo ka warqaba in maalin maalmaha ka mid ah ay asxaabtiisu khiyaanayn doonaan, isaga ka tagi doonaan, oo ay askartu garaaci doonaan oo ay si arxan darro ah iskutallaabi doonaan. Iskusoo wada duuboo, wuxuu ogaa inay tahay himiladiisu ahayd qaadashada dhammaan dembiyada qariimka leh ee dadku si ay ugu adeegaan kafaaraggudka aadanaha oo dhan. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay ahayd inuu adkaysto, wuxuu ku dhawaaqay: "harqoodkaygu waa mid jilicsan, rarkayguna waa fudud yahay" (Matayos 11,30).
Ciise wuxuu naga codsanayaa inaan u nimaadno isaga oo aan u helno nasasho iyo nasiino culeyska iyo culayska dembiga. Ciise wuxuu yidhi aayaddo yar ka hor: «Wax walba aabbahay baa i siiyey; oo ninna wiilka yaqaan ma jiro aabo keliya; mana jiro qof garanaya aabaha inuu yahay kaliya wiilka iyo cidda uu wiilku doonayo inuu u muujiyo » (Matayos 11,27).
Waxaan ka helnaa fikrad duulimaadka degdegga ah ee culeyska weyn ee dadka uu Ciise u ballanqaaday inuu yareyn doono. Ciise wuxuu inoo muujiyaa wejiga runta ah ee qalbiga aabaha markii aan ugu nimaadno xaggiisa rumaysad. Wuxuu inaga casuumay xiriirka qumman, ee kaamilka ah ee mideeya kali isaga oo leh aabaha, taas oo shaki la'aan ah in Aabbuhu inaga jecel yahay, jacaylkaasna aan markasta aaminno. "Laakiin kanu waa nolosha weligeed ah inay ku gartaan, kan aad tahay Ilaaha runta ah oo keliya, iyo kii aad soo dirtay, Ciise Masiix" (Yooxanaa 17,3) Intii uu noolaa, Ciise wuxuu had iyo jeer la kulmay caqabadda adkaysashada weerarada Shaydaanka. Kuwani waxay isu muujiyeen jirrabaadda iyo cidhiidhiga. Laakiin xitaa iskutallaabta dusheeda, wuxuu ku sii adkaystay amarkiisa rabbaaniga ah ee badbaadinta dadka markii uu qaatay dembiga aadanaha oo dhan. Isagoo culeys ku ah dembiga oo dhan, Ciise, sida Ilaah oo isla waqtigaasna qof dhimanaya, wuxuu muujiyey ka tagitaankiisii ​​aadanaha isagoo ku qaylinaya: "Ilaahayow, Ilaahayow maxaad ii dayrisay?" Matayos (27,46).
Isaga oo calaamad u ah aaminka aan kala go 'lahayn ee aabihiis, wuxuu ka hadlay wax yar dhimashadiisa ka hor: "Aabbow, Ruuxayga ayaan gacantaada gelin!" (Lukos 23,46) Wuxuu ina siiyay inaan fahamno inuusan aabihii waligiis ka tagin, xitaa markuu qaaday culeyska dembiga ee dadka oo dhan.
Ciise wuxuu ina siinayaa aaminaada ah inaan isaga kula midowno dhimashadiisa, aaskiisa iyo sarakicistiisa nolol daa'im ah. Tan waxaan ku aragnaa nabad dhab ah oo maskaxeed iyo xorriyad ka timaada harqoodkii indho la’aanta ruuxiga ah ee Aadan ina soo dejiyey dayrta.
Ciise wuxuu si cad u sheegay ujeedada iyo ujeedada uu noogu yimid: "Laakiin waxaan u imid inaan iyaga nolosha u keeno - nolol nolol oo dhan leh" (Johannes (10,10 Tarjumaadda New Geneva). Nolosha oo buuxda waxay ka dhigan tahay inuu Ciise dib noogu soo celiyay aqoontii saxda ahayd ee dabeecadda Eebbe ee inaga fogaatay dembiga aawadiis. Intaa waxaa dheer, Ciise wuxuu ku dhawaaqay in uu yahay "milkii sharafta aabihiis iyo aragtida dabeecadiisa" (Cibraaniyada 1,3). Wiilka Ilaah ma muujinayo oo keliya ammaanta Ilaah, laakiin isaga qudhiisa ayaa ah Ilaah oo caddeeya ammaantaan.
Aad aabe, aabaha, u aqoonsatid wiilkiisa xiriir wadaag ah Ruuxa Quduuska ah, oo runti aad kuhesho nolol buuxda jacayl uu kuu diyaariyey bilowga adduunka!
waxaa qoray Brad Campbell